रातभरी भिजाएको हरियो खुसार्नीको पानी बिहानै पिउनुहोस्, भाग्छन् यी रोगहरू | स्वास्थ्य जीवनशैली
June 1, 2021 June 1, 2021 NepstokLeaveaComment on रातभरी भिजाएको हरियो खुसार्नीको पानी बिहानै पिउनुहोस्, भाग्छन् यी रोगहरू
यो कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ होला कि हरियो खुर्सानी बिना नेपाली खाना खान सोच्न पनि सकिदैन। तर सायद तपाईलाई यो कुरा थाहा छैन होला कि हरियो खुसार्नीले स्वास्थ्यमा धेरै लाभ पुर्याउँछ। हरियो खुसार्नी एक औषधी समान हुन्छ । जसले कैयौँ रोगलाई खतम गर्दछ।
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ कि हरियो खुर्सानीमा डायटरी फाइबर भरपुर मात्रामा मिल्ने गर्दछ , जो पाचन प्रणालीको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। हरियो खुर्सानीमा भिटामिन सी भरपुर मात्रामा हुन्छ, जसले छालालाई स्वस्थ राख्दछ र तव्चामा पनि निखारता ल्याउन मदत गर्छ।
यो मात्र होइन, हरियो खुर्सानीले तौल कम गर्न गर्दछ । हरियो खुर्सानी शरीरको अधिक वजन घटाउन र मेटाबोलिज्म सुधार गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। आज हामी तपाईंलाई ग्रीन मिर्चको त्यस्तै एक प्रयोगको बारेमा बताउन जाँदैछौं जुन तपाईं प्रयोग गरेर स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ।
हरियो खुर्सानीले रगतमा चिनीको मात्र सन्तुलित गर्न अहं भूमिका खेल्छ । यदि कसैलाई मधुमेह भएको छ भने हरियो खुर्सानीको सेवनले फाइदा हुने बताइन्छ।
हरियो खुर्सानीमा फाइबरको मात्रा हुने हुनाले यो कब्जियत हुनेहरूका लागि पनि फाइदाजनक छ । हरियो खुर्सानीले कतिपय प्रकारका क्यान्सरहरू पनि निको गराउन मद्दत गर्छ।
राति सुत्ने समय भन्दा केही पहिला २/३ वटा हरियो खुर्सानीलाई धोएर बीचबाट काट्ने र एक ग्लास पानीमा भिजाएर राख्ने अनि बिहान उठेर त्यसको सेवन गर्नाले पेटको समस्याबाट मुक्ति मिल्ने कतिपय अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
यस पछि, बिहान उठ्ने बित्तिकै भिजाएको यो हरियो खुर्सानीको पानी पानी पिउनुहोस्, तर यो पानी पिउनु अघि तपाईंले न कुनै कुरा खान नै हुन्छ न केही पिउनु नै हुन्छ। यी सबै मिनरल्स र भिटामिनहरू सँगै लिमा एक व्यक्तिको शरीर दिनभर ऊर्जाले भरिन्छ ।
लगभग एक हप्ताको लागि हरेक बिहान यो पानी पिउँदा, व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै समस्याहरू निश्चित रूपमा समाधान हुन्छ साथ साथै छाला चम्किन्छ र अन्य लाभहरू पनि हुन्छन् । लगातार एक हप्ता यो प्रयोग गरेपछि तपाई आफैले धेरै राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ ।
उज्जवल थापाको मृ’त्यु भएको छैन, भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह
हरियो मकै मात्र हैन यसको जुँगा पनि हुन्छ फाइदाजनक, यस्ता समस्याको लागि हुन्छ रामबाण !
होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका संक्रमितहरुलाई डा. रवीन्द्र पाण्डे दिए कोरोना जित्ने यस्ता १६ टिप्स